Iyo odyssey yehupenyu inotora, kubva pakubata kusvika pakuzvarwa (vhidhiyo) - Afrikhepri Fondation
Iyo odyssey yehupenyu inotevedza, kubva pakubata kusvika pakuzvarwa (Vhidhiyo)
Liye zvinyorwa zvinodzoka, kubva pakuzvara kusvika pakuzvara, iyo mwedzi mipfumbamwe yeakasarudzika yeakasarudzika: nhumbu, genesis yehupenyu hwevanhu. Barbara naManu vari kutarisira mwana wavo wekutanga. Navo, vhiki nevhiki, uye nekuda kwazvino ruzivo rwesaenzi uye mukana unoshamisa unopihwa nemifananidzo inogadzirwa nekombuta, director Nils Tavernier vanotitungamira kuti tizive hupenyu hwedu hwekutanga: intrauterine hupenyu.
Yakataurwa naJaques Perrin, "Iyo Odyssey yeHupenyu" inoshandisa mifananidzo inogadzirwa nekombuta yekufema chaiko kweiyi rwendo kune kwakabva. Maawa e2000 ekushanda kwegoridhe, yakaitwa naMac Guff Ligne, yekupa mashiripiti. Na, sehambo, yechokwadi uye nyoro nyaya yaBarbara, Manu nemwana wavo.
Iyo odyssey yehupenyu
5 nyowani kubva pa12,00 €
21 yakashandiswa kubva € 2,16
Tenga 12,00 €
kubva munaGunyana 18, 2020 9:47 AM
Chii chinonzi munamato nekufungisisa